Vietnam dia mandefa sidina Da Nang avy any Hong Kong sy Singapore
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Vietnam dia mandefa sidina Da Nang avy any Hong Kong sy Singapore
Airlines • Airport • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovao Mafana Hong Kong • Vaovao • Resorts • Vaovao Mafana Singaporeana • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany • Vaovao Mafana Vietnam
Vietjet nanambara ny fanombohana zotra iraisam-pirenena roa, mampifandray an'i Da Nang, toerana itodiana amoron-dranomasina malaza any Vietnam, miaraka amin'ireo foibe ara-toekarena roa any Asia - Singapore sy Hong Kong.
Ny zotra Da Nang - Hong Kong dia hiasa sidina miverina isan'andro manomboka amin'ny 12 Desambra 2019 miaraka amin'ny faharetan'ny sidina adiny iray sy 45 minitra isaky ny tongotra. Avy any Da Nang ny sidina amin'ny 12:45 ary tonga any Hong Kong amin'ny 15:30. Ny sidina fiverenana dia hiainga avy any Hong Kong amin'ny 17:20 ary hiditra ao Da Nang amin'ny 18:05 (Rehetra amin'ny ora ao an-toerana). Miaraka amin'ny fanampiana ny zotram-piaramanidina vaovao, Vietnam izao dia miasa amin'ny lalana telo avy any Vietnam mankany Hong Kong, ao anatin'izany ny HCMC / Phu Quoc / Da Nang - Hong Kong miaraka amin'ny sidina telo isan'andro matetika.
Miasa isan'andro ihany koa, ny làlana Da Nang - Singapore dia hanomboka asa manomboka amin'ny 20 Desambra 2019 miaraka amin'ny faharetan'ny sidina 2 ora 40 minitra isaky ny tongotra. Ny sidina dia hiala ao Da Nang amin'ny 12:20 ary tonga any Singapour amin'ny 15:55. Ny sidina fiverenana dia hiainga avy any Singapore amin'ny 10:50 ary hiditra ao Da Nang amin'ny 12:30 (Reina amin'ny ora eo an-toerana). Vietjet dia miasa amina lalana 3 ankehitriny mampitohy an'i Vietnam sy Singapore, ao anatin'izany ny Hanoi / HCMC / Da Nang - Singapore izay misy sidina 4 isan'andro.
Ny filoha lefitra Vietjet Nguyen Thanh Son dia nilaza fa: "Mba hihoarana ny filan'ny fivezivezena mandritra ny vanim-potoanan'ny faran'ny taona dia nanafatra fiaramanidina maoderina vaovao i Vietjet, ao anatin'izany ny A321XLR" lavitra be "farany an'ny Airbus, ary manohy manitatra ny tambajotram-sidina iraisam-pirenena. Ireo zotra vaovao avy any Da Nang mankany Singapore sy Hong Kong dia hanamafy ny fifandraisana misy eo Vietnam sy ivon-toekarena sy fizahan-tany roa lehibe any Azia. Reharehaka i Vietnamjet amin'ny fampiroboroboana an'i Da Nang, fantatra ihany koa amin'ny hoe "tanàna be mpitia indrindra ao Vietnam", ho an'ireo mpizahatany iraisam-pirenena ary koa hamoronana safidy mety kokoa sy hitahiry vola kokoa ho an'ny olona hizaha toerana vaovao. Vietjet dia manolotra seza mihoatra ny 2,000 miainga avy any Da Nang mankany Singapore, Hong Kong, Seoul, Daegu, Taipei, Tokyo (Haneda) isan'andro miaraka amin'ny fandaharam-potoanan'ny sidina matetika amin'ny sarany mora vidy. ”
Da Nang, tanàna amoron-tsiraka malaza eto afovoan'i Vietnam, dia mahazo vahana tsy ho an'ny mpizahatany an-trano ihany fa koa ny mpizahatany iraisam-pirenena. Izy io koa dia vavahady mankany amin'ny toerana fizahan-tany manodidina azy, anisan'izany ny tanànan'i Hoi An, ilay tanàna mimanda teo aloha tao amin'ny tanànan'i Hue, Quang Binh, sns.